Inweta Onwe Gị n'Worldwa Juru Ọnụ | Martech Zone
N'ime oghere ire ere taa, ahaziri iche dị iche iche n'ọgụ iji dọta uche ndị ahịa. Ndị ụlọ ọrụ gafee ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịwepụta ahụmịhe echefuru echefu, ahụmịhe nke ndị ahịa iji wulite iguzosi ike n'ihe ma meziwanye ahịa - mana ọ dị mfe ikwu karịa eme.
Creatmepụta ụdị ahụmịhe a chọrọ ngwaọrụ iji mụta banyere ndị ahịa gị, wulite mmekọrịta ma mara ụdị onyinye ha ga-enwe mmasị na, na mgbe. Ihe dị oke mkpa bụ ịmara ihe onyinye na-adịghị mkpa, iji zere iwe ma ọ bụ ịhapụ ndị ahịa gị kachasị ntụkwasị obi.
The “atọ A” nke Mmekọrịta Owuwu
Iwulite mmekorita ndị ahịa na mkpọsa ahịa nwere ike ịdaba na usoro atọ: nnweta, bonobo na ọrụ.
nnweta - bụ ihe niile banyere inweta nlebara anya ndị ahịa na ngwaahịa na ịnweta ndị ahịa ọhụụ, nke pụtara iru ndị nwere ike ịre ahịa na ahịa sara mbara na ahịa na-arụ ọrụ, mmekọrịta mmekọrịta, mgbasa ozi na onyinye.
Tinye n'ọrụ - ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya n’inweta ndị ahịa ime ihe ụfọdụ ma ọ bụ soro ụzọ achọrọ achọrọ nke na-abawanye uru ndị ahịa. Nke a nwere ike ịpụta ịga ụlọ ahịa oge enyere kwa ọnwa, mezue otu ụdị azụmahịa ma ọ bụ mmatawanye maka onyinye dị iche iche. Ebumnuche nke oge ọrụ bụ mmekọrịta ndị ahịa na ụdị ahụ, na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịbanye ha ma wulite mmekọrịta.
Arụ ọrụ - akụkụ nke ikpeazụ bụ ebe mmemme na uru iguzosi ike n'ihe batara.
Ọ bụ ezie na akụkụ nke mbụ nke mmekọrịta mmekọrịta na-adabere na mgbasawanye, usoro abụọ ndị sochirinụ bụ ihe gbasara mmadụ. Naanị otu ụzọ ịmalite ịmalite ọrụ na ọrụ ga-aga nke ọma bụ ma ọ bụrụ na onye ahịa nwere mmasị onwe ya na onyinye ma ọ bụ ngwaahịa ahụ.
Ọ bụrụ na ihe a tụrụ aro ma ọ bụ ihe a chọrọ inye gị enweghị isi, n'ihi gịnị ka ha ga-eji tinye aka? N’echiche a nchịkọta Bụrụnụ ngwa ahịa bara uru maka ndị na-ere ahịa na-achọ ịhazigharị ihe ndị a na-enye ma wuo iguzosi ike n'ihe nye ndị ahịa ha.
Nchịkọta na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịdebe ngwa ngwa nke na-adabara na atụmanya ha na nke na-adịghị, na-eme ka ha nwee ike iwepụ onyinye ndị na-adịghị mkpa, na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ha dị ọcha ma bụrụ ndị nwere ntụkwasị obi nke ozi na ngwaahịa maka ndị ahịa ọ bụla.
Ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike, ma ọ bụrụ na ha mara otu akara ga-ebuga ihe ha chọrọ dabere na ịzụta na mmasị ndị gara aga, nke ahụ bụ akara ha ga-aga.
Na-arụ ọrụ na Data
Kedu ngwá ọrụ dị mkpa iji mee ka mmekọrịta mmekọrịta a kwe omume?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ data - ma ọdịnala na mmekọrịta mmadụ na ibe - ọ bụ ihe ịma aka na-aga n'ihu na-egwupụta m, bulie ngalaba ndị ahịa kachasị mkpa ma meghachi omume ozugbo maka mkpa ndị ahịa. Taa ụlọ ọrụ kachasị dị iche iche na-eche ihu bụ na ha bụ mmiri riri na data na agụụ maka nghọta. N'ezie, na-esote mwepụta nke nyocha kachasị ọhụrụ site na CMOSurvey.org, Director ya Christine Moorman kwuru na otu n'ime nsogbu ndị kachasị bụ ịchekwa data kama kama ịmepụta nghọta siri ike site na data ahụ.
Mgbe ndị na-ere ahịa ji ngwa ọrụ nyocha ziri ezi, agbanyeghị, nnukwu data nwere ike bụrụ ohere. Ọ bụ data a nke na-enye ndị na-ere ahịa ahịa ahịa aka inweta ihe ịga nke ọma na mmalite na ọrụ nke mmekọrịta ụlọ - ha chọrọ ịma otu esi arụ ya. Ijikọta azụmahịa, data na mgbakọ na mwepụ iji wepụta nghọta banyere otu onye ahịa nwere ike isi meghachi omume na onyinye ma ọ bụ mmekọrịta ọ bụla nyere ụwa dị iche dị ka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iji meziwanye ebumnuche ha na ịhazi ha.
Nchịkọta na-eme ka ndị na-ere ahịa nwee nghọta nke nzuzu data taa ma na-emeziwanye nke ọma na mpaghara ndị a, nke na-enyere aka iwulite iguzosi ike n'ihe na ego ha ga enweta.
Otu ụlọ ahịa otu ebe nke a doro anya bụ ndị na-ere ahịa. Ngwa ngwa ngwa, mgbama na teknụzụ ndị ọzọ na-emepụta iju mmiri nke data gburugburu njem nchekwa nke ndị ahịa. Ndị na-ere ahịa Smart na ụdị na-eji nchịkọta ịhazi data ahụ n'oge dị adị ma mepụta onyinye dị mkpa nke na-eme ka ndị ahịa rụọ ọrụ tupu ha ahapụ ụlọ ahịa ahụ.
Dị ka ọmụmaatụ, Shidị Hillshire nwere ike soro ndị ahịa na ụlọ ahịa na-eji iBeacons, na-enye ha ohere iziga mgbasa ozi ahaziri iche na Kupọns maka ọrụ ha soseji mgbe onye na-azụ ahịa na-abịaru nso na ngalaba nke ụlọ ahịa.
Ọ bụghị ihe nzuzo na ụwa mkpọsa taa na-asọ mpi karịa na mbụ. Iwulite iguzosi ike n'ihe nye ndị ahịa bụ ihe a na-elekwasị anya maka ụdị ndị kachasị elu, naanị otu ụzọ ha ga-esi mee nke a bụ ịnweta ndị ahịa ha.
Ọ gaghị eme n'otu ntabi anya, mana mgbe abịakwutere ya nke ọma, ndị na-ere ahịa nwere ikike itinye data nke ndị ahịa ha n'ọrụ ka ha wee ghọta nke ọma mkpa onye ọ bụla na ihe ndị ọ masịrị ha. Ihe omuma a bu uzo iji meziwanye ihe ndi mmadu mere, mmekorita ndi ahia na n'ikpeazu ulo oru.
Tags: nnwetabonoboArụ ọrụosisinnukwu datacmosurveyezi ndị ahịaụdị ugwuibeaconibeaconsMobile na Mbadamba ụrọndị ahịashopping
Dị ka Onye Nchoputa na Onye isi oche nke Chukwunyere, Venkat bụ onye ọhụụ n’azụ LatentView. O nyerela ọtụtụ ndị ahịa 500 aka Fortune ka ha nwee ike ịgbalite ụdị ọrụ nnyefe nke ndị dị n'ụsọ oké osimiri India na ọrụ ego na ngalaba telecom kemgbe ihe karịrị afọ iri. Ọ nwere ihe karịrị afọ 18 nke ahụmịhe na njikwa njikwa, teknụzụ na njikwa ọrụ IT ụwa.
Otu esi ahoputa onye na enye oru email